FALANQEYN XASAASI AH: Maxay ka dhigan tahay Qeylo dhaanta Musharaxiinta & Siyaasiinta Puntland ee kuwajahan Doorashada 2019? – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home 2018 February W.Gudaha, Wararka Doorashada P/land, Wararka Maanta FALANQEYN XASAASI AH: Maxay ka dhigan tahay Qeylo dhaanta Musharaxiinta & Siyaasiinta Puntland ee kuwajahan Doorashada 2019?
FALANQEYN XASAASI AH: Maxay ka dhigan tahay Qeylo dhaanta Musharaxiinta & Siyaasiinta Puntland ee kuwajahan Doorashada 2019?
February 25, 2018 |by W LAASCAANO| 2
MUQDISHO(P-TIMES)- Ma’ahan wax aan lafileyn in ay siyaasiin soo qabtay Jagooyin sare ahna musharaxiinta doorashada Madaxtinimada nagu soo fool leh ee Puntland ay soo saaran warsaxaafadeed ay ku mideysan yihiin, balse waa midkii koowaad oo ay si hoose uga hadlayaan arrimaha waqtigan ka jira gudaha dalka, gaar ahaana Ammaanka, Siyaasadda, Duulaanka Somaliland iyo Dibu eegista Dastuurka Faderaalka.
Nuqul kamid ah warsaxaafadeed ay galabtay soo saareen Siyaasiintan oo ay heshay Puntland, wuxuu u muuqday mid lagu beegay waqti xasaasi ah oo ay dadku aad u sugayeen sidii ay u heli lahaayeen macluumad ku saabsan waxa socda.
Puntlandtimes ayaa is dultaagyo kooban oo ay ku sameysay warsaxaafadeedka waxaa ka dhex muuqda Sadaro siyaasadeed oo ugub u noqon kara doorashada nagu soo aadan, gaar ahaana mudada jiritaanka Xukuumadda hadda talada haysa oo waqtigeeda uga harsan yihiin 10 bilood.
Madasha oo soo qaaday arrimaha Ammaanka waxay sheegtay in loo baahan yahay in la sugo Amniga oo muhiimada koowaad laga dhigo, taas oo ay gol leedahay sugida Amniga musharaxiinta iyo hardanka loolanka doorashada oo ay suuragal tahay in uu kululaado.
Mudo kororsi ayay sheegeen in ay walaac ka qabaan, laakiin marnaba lama soo qaadin qorshaha DOORASHO SIMAN, oo maalmihii ugu dambeeyey laga waday magaalada Muqdisho ayna qeyb ka ahaayeen Madaxda dawlad gobaleedyada qaarkood oo mudo xiloodkoodu ka horeeya kan Puntland.
Puntlandtimes waxay ogaatay in shirka 28 March 2018 kulan ka dhici doona magaalada Baydhabo oo ay casumaadiisa leedahay dawladda Faderaalka Soomaaliya loogu walqali doono hanaanka doorashooyinka SIMAN, kaas oo ay dhaqaalihiisa suuragal tahay in ay balan-qaadaan Beesha Caalamka.
Madasha PFG waxay si feejigan u soo qaaday xaaladda dhulka maqan ee Puntland, waxaana lasoo qaaday oo kaliya deegaanka Tukaraq oo ay ciidamada Somaliland si fudud ku qabsadeen 8 January, waxaana aan lasoo qaadin in lasoo celiyo dhulkaas.
Warsaxaafadeedku wuxuu ku koobay Xaaladda Tukaraq baaq loo diray Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo loo sheegay in uu ciidamadiisa kala baxo deegaankaas, aana lahorseedin daganaansho la’aan iyo colaad ka dhacda gobalkaas, tanni waa hadal diblumaasiyaadeed.
Falanqeeyaasha siyaasadda ayaa rumeysan in si feejigan ay siyaasiintan u taabteen xaaladda Aloosan ee Tukaraq, oo kamid boogaha ay cabsida ka qabaan in Mudo kororsi Xukuumadeed ku yimaado, sidaas oo kale siyaasiinta ayaa ka durkay in ay arrimo ciidan ama talaabo ku haboon ka hadlaan waqtigan.
Inta badan xiligan oo kale loolanka Siyaasadeed ee Puntland ayaa gaara heerka ugu sareeya, waxaana kal hore waqtigan oo kale Xukuumadii hore ay la kulantay jilaafooyn siyaasadeed iyo daad kusoo rogmaday oo uga imaanaya Madasha Musharaxiinta oo uu xiligaas xubin firfricoon ka ahaa Madaxweynaha hadda xilka haya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Horaanta bisha May 2018 ayaa lafilayaa in ay inta badan Musharaxiinta u taagan Madaxweyne-nimada Puntland soo galaan gudaha mandiqada oo ay xiligaas ka bilaabi doonaan loolankii ugu adkaa oo qaarkiis hadda si weyn uga socdo gobalada iyo degmooyinka Puntland oo ay door ku leeyihiin ragga iyo hablaha u ordaya helida xildhibaanimada oo kala cadaanaysa bisha October wixii ka dambeeya.
Warsidaha Puntlandtimes ayaa si dhaw ula socdo wararka kusaabsan Hardanka Madaxtinimada ee Puntland, waana Warfaafiye Madaxa banaan, wuxuuna falanqeyn, dabagal iyo xog raadin ku sameyn doonaa inta badan musharaxiinta u taagan Madaxweyne-nimada 2019 iyo arrimaha aan wali waxba laga qaban ee Puntlandta 20 sanno jirsatay.
Filed in: W.Gudaha, Wararka Doorashada P/land, Wararka Maanta
2 thoughts on “FALANQEYN XASAASI AH: Maxay ka dhigan tahay Qeylo dhaanta Musharaxiinta & Siyaasiinta Puntland ee kuwajahan Doorashada 2019?”
warsame February 25, 2018 at 11:59 pm · Edit
Majiro wax la dhaho aar burtinle, muwaadin reer puntland oo dhalad ah uma ololeeyo dhiig daata, dhhiga soomaalida iyo gaar ahaan dhiiga Reer Pl, lalabadda noocaan ah waxaa qora cadowga umadda soomaliyeed & gaar ahaan mid neceb nabadda & horumarka ka hano qaadaay PL 19 sano ee PL jirtey, ciise Maxamuud ayuunu u gafey qofkaas, waayo Magaalo Madaxda PL ee Garoowe waa caasumadda uga nabad badan uguna horumar badan dhamaan caasumadaha soomaaliya, taasna waxaa lagu gaaray maamulka ay dhisteen reer Pl iyo rabitaankii caasumadnimo ee shacabka Garoowe. Guusha Alle ayaa leh, Allow PL sharta daalinka ka dhowr.
Haliye February 26, 2018 at 12:22 am · Edit
Ptimes waxaa qora laangaab cumar maxamud ah, ciise maxamud inuusan bootayn waxaa kaaga markhaati ah waa nimanka markii lasoo weeraro difaaca.
Taasina waa marag madoonto.